Family Archives - Page 56 of 58 - Lifestyle Myanmar
၁။ အကြောက်တရားနဲ့ အုပ်ချုပ်တာက သင့်ကလေးကို ပိုဆိုးသွမ်းစေပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကို ကုန်းချောခြင်း ဒါမှမဟုတ် လိမ်းလည်ပြောဆိုခြင်းက သာမာန်ဆိုးသွမ်းတာထက် ပိုပြီးဆိုးစေပါတယ်။ ဒီအကျင့်ဆိုးက ကြီးလာတဲ့အခါ စိတ်ယုတ်မာတဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကျောင်းသားဘဝ ဆရာမက အိမ်စာပေးလို့မလုပ်ခဲ့တဲ့အခါ ဆရာမရိုက်မှာကြောက်လို့ အိမ်က မိဘတွေအပေါ် အပြစ်ပုံချခြင်း၊ တခါတလေ ကိုယ့်ရဲ့ အပြစ်လျော့ပေါ့အောင် အခြားသူတစ်ဦးဦးအပေါ် လွဲချပြီး ကုန်းချောပြီးပြောဆိုခြင်း၊ လိမ်လည်ပြောဆိုခြင်း စတဲ့အကျင့်တွေက...
၁။ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံ ခရိုအေးရှားနိုင်ငံဟာ မိခင်တစ်ယောက်ကလေးမီးဖွားပြီးဆိုရင် အရမ်းကိုအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ သူတို့နိုင်ငံမှာ မိခင်တစ်ယောက်က ကလေးမီးဖွားပြီးဆိုလျှင် တရားဝင်ခွင့်ရှည် ရက်ပေါင်း ၄၁၀ ထိပေးအပ်ထားပါတယ်။ တစ်နှစ်ထက်ကျော်လွန်တဲ့အချိန်ကို တရားဝင်ပေးအပ်တဲ့အပြင် ကလေး ၆လသားအရွယ်အထိ ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့ငွေအဖြင့် သူမရဲ့ လစာ ၁၀၀ရာခိုင်နှုန်းအပြည့် လစဉ်ထောက်ပံ့ပေးကြပါတယ်။ ၂။ ဗြိတိန်နိုင်ငံ ဗြိတိန်နိုင်ငံက မိခင်တစ်ယောက်ကလေးမီးဖွားပြီးဆိုရင် ရက်ပေါင်း ၃၆၅ရက်အထိ တရားဝင်ခွင့်ပေးအပ်ထားပါတယ်။ တစ်နှစ်စာခွင့်ပေးအပ်ထားပြီး မီးဖွားချိန်...
အသကျ ၃၅နှဈကြျောမှ ပထမကလေးယူဖို့ စဉျးစားနသေူတှအေတှကျ ဖွဈနိုငျခရြှေိသော အန်တရာယျမြားနှငျ့ လြော့ခနြိုငျမယျ့ နညျးလမျးမြား
ကိုယျဝနျဆောငျတဲ့အခါ အမြိုးသမီးတဈယောကျအတှကျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာနှငျ့ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ နှဈခုလုံးကို ကောငျးကောငျးပွငျဆငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ယနခေ့တျေမှာ အမြိုးသမီးတှဟော ဘဝမှာအရငျဆုံးပွီးပွညျ့စုံပွီဆိုမှ ပထမဆုံး ကလေးကို ယူဖို့ ရှေးခယျြကွပါတယျ။ 1973 မှာ အမြိုးသမီး 1000 မှာ 1.7ခနျ့ဟာ အသကျ 35နှငျ့ 39ကွးမှ ပထမဆုံးကလေးယူကွပွီး 2012 မှာ အမြိုးသမီး 1000မှာ 11ယောကျခနျ့ဟာ ဒီတူညီတဲ့အသကျအရှယျအုပျစုမှာပဲ...
တစ်ရက်ကို ၃၈၆၀၀၀ ခန့်လောက် နေ့စဉ်မွေးဖွားနေကြတဲ့ ကလေးတွေကို မိဘတွေအနေနဲ့ ထိန်းကျောင်းရတဲ့အခါ အရမ်းကို ခက်ခဲကြမ်းတမ်းကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအခက်အခဲကို ဖခင်တွေဘယ်လိုကျော်ဖြတ်သလဲဆိုတော့ ကြည့်လိုက်ဦးနော်။ ၁။ ကလေးထိန်းမဲ့ မိန်းမ မရှိတဲ့အခါ အဖေရဲ့ ကလေးထိန်းနည်းအသစ်။ ၂။ Game ကတစ်ဖက် ကလေးကတစ်ဖက် ၃။ ငယ်ငယ်က မျောက်ရှုံးအောင်ဆော့တဲ့သူက ဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ။ ၄။ အမွှာမွေးပြီး မမှတ်မိရင်...
အမိဝမျးထဲမှာ နတေဲ့ကလေးတှေ ဘယျအခြိနျတှမှော ပြျောရှငျမှုအမြားစု ခံစားရသလဲ?
မမေနေဲ့ မမေေ့ ကလေးအကွားက သံယောဇဉျနှောငျကွိုးဟာ မမေတေို့ ထငျထားတာထကျ အမြားကွီးစောပွီး ဖှဲ့တညျပါတယျ။ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ သိပ်ပံလလေ့ာမှုတဈခုအရ သန်ဓသေားတဈဦးဟာ အမရေဲ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာအဆငျ့ကို ခံစားလို့ရနိုငျပါတယျ။ မမှေးသေးတဲ့ ကလေးတှဟော မမေရေဲ့ခန်ဓာကိုယျ(စိတျခံစားမှု)မှတဆငျ့ အခကျြပွမှုတှေ ရရှိပါတယျ။ မိခငျကပြျောရှငျနလြှေငျ ကလေးလညျး ပြျောရှငျမှုရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။ ၁။ ခြိုတဲ့အစားအစာတှေ ကလေးတှဟော ကိုယျဝနျဆောငျရဲ့ ၁၃-၁၅ပတျမှာ အမြိုးမြိုးသော အရသာတှကေို ခှဲခွားဖို့...
အရွယ်ရောက်ပြီး တချို့လူတွေဟာ စောင့်ဆိုင်းရခြင်းကို စိတ်မရှည်တတ်ကြပါဘူး။ ကလေးငယ်တွေဆိုရင်တော့ ပြောစရာမလိုလောက်အောင်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ယခုပြောပြမယ့် အချက် ၅ ချက်က သင့်ကလေးငယ်ကို စိတ်ရှည်တတ်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ ၁။ အချိန်ကို မြင်ယောင်စေခြင်း ကလေးငယ်တွေဟာ အသက် ၉ နှစ်ဝန်းကျင်မှာ စိတ္တဇဆန်တဲ့ စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေ စတင်ဖွံဖြိုးလာပါတယ်။ အသက်ကိုးနှစ်မတိုင်မှီမှာ သူတို့ရဲ့စိတ်က လက်ဆုပ်လက်ကိုင်ပြနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကိုပဲ ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက်ခက်ခဲစေတဲ့ ၁၅...
Single Parent တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကလေးကိုကြီးပြင်းလာတဲ့အထိ ပြုစုပျိုးထောင်ရတာဟာ အလွန်စိတ်ဖိစီးစရာတွေ များလိမ့်မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ Single parent တစ်ယောက်အနေနဲ့ များပြားလှတဲ့တာဝန်တွေကို လက်တွဲဖော်မပါပဲ ဖြေရှင်းရမှာဖြစ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်တွေများစွာကိုလည်း တစ်ကိုယ်တည်းချမှတ်ရမှာပါ။ ဒီလို မိဘတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ရင် သင့်ရဲ့ကလေးအတွက် ပြုစုပျိုးထောင်မှုနည်းလမ်းတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကိုသင်ယူရမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ စိန်ခေါ်မှုများစွာကို ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့နဲ့ ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတွေကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့ကလေးအတွက် သင်သိသင့်သိထိုက်တဲ့ Single Parenting နည်းလမ်းအချို့နဲ့...
သင့်ရဲ့ချစ်သူ ဒါမှမဟုတ် ခင်ပွန်းဖြစ်သူဟာ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကို အတိအကျသိရှိနိုင်မယ့် သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ သူဟာဂရုစိုက်ပြီးတော့ သေချာနားထောင်တတ်တယ် သင့်ရဲ့အမျိုးသားဟာ သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတော့ သင်သေချာပေါက် လိုအပ်ချက်တွေကို အာရုံစိုက်ပေးတတ်ခြင်းဟာ နောင်တချိန်မှာ ဖခင်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာမယ့် လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ မိနစ်တိုင်းအာရုံစိုက်မှုကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်တို့ရဲ့ relationship အတွင်းမှာ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မှုတွေကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ။ အကောင်းဆုံးမိဘတွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ ခံစားချက်နဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို...
သင့်ရဲ့ကလေးငယ်ကို သင်ကြားထားပေးသင့်တဲ့ အရေးအကြီးဆုံး ဘဝကျွမ်းကျင်မှု (၁၀) ချက်
ကလေးငယ်တွေဟာ မိဘမျက်စိအောက်မှာ ရှိနေတာကြောင့် ဘဝကျွမ်းကျင်မှု အများကြီးရှိစရာ မလိုဘူး ဆိုပေမဲ့လဲ သူတို့လေးတွေ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ၊ ဒါမှမဟုတ် ငယ်ရွယ်စဉ် မိဘမျက်ကွယ်မှာ ဒုက္ခတစ်ခုခုနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ ကျောင်းတွေမှာ ပညာရေး၊ အသိအမြင်တွေအပြင်၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အားကစားတွေ သင်ပေးနေပေမဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှု ကျွမ်ကျင်စေဖို့အတွက် မလုံလောက်သေးပါဘူး။ သူတို့တွေကို မိဘတွေကိုယ်တိုင် အိမ်မှာပဲသင်ကြားပေးသင့်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုဘဝကျွမ်းကျင်မှုတွေက...
သင့်ကိုဖွင့်မပြောပေမယ့် သင့်ရဲ့မိဘတွေ သင့်ဆီက လိုချင်တဲ့ အရာ(၇) ချက်က ဘာတွေလဲ
မိဘတွေဆိုတာ သားသမီးတွေဆီက ဘာမျှော်လင့်ချက်မှ မရှိပဲ ပေးဆပ်ခြင်းသက်သက်နဲ့ ချစ်တယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် တကယ်တော့ သားသမီးတွေဆီက တောင်းတတတ်ကြတဲ့ အရာတချို့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှသင့်ဆီက မတောင်ခံတတ်သလိုပဲ တခါတလေသူတို့ကိုယ်တိုင် မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ဆန္ဒကို သင်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက် မိဘတွေစိတ်ထဲက တောင့်တတတ်တဲ့ အရာတချို့ကို မျှဝေပေးပါရစေ။ ၁။ ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်တချို့ သင့်ဆီကနေ သူတို့အတွက် အချိန်ပေးမှုဟာ တကယ့်ကိုအရေးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့အိုမင်းလာတဲ့အခါမှာ...